Isibindi e ukhilimu omuncu kanye no-anyanisi kungenziwa wakhonza eyodla, futhi kanjalo nje, nge nocezu lwesinkwa emhlophe noma onsundu, futhi, kanye nanoma yimuphi omunye Hlobisa. Kunoma yikuphi, lokhu dish ngeke ukwanelisa kahle futhi ujabulele kunoma zonke izinhlawulo amalungu omkhaya. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ngaphambi kokupheka lesi sidlo, kufanele siqiniseke ukuthenga eceleni ezifanele. Indlela efanele ukhethe ukutshela kancane okunye.
Kukhethwa efanele ovela eceleni
Ngaphambi kokuba nginixoxele le mayelana nendlela ukupheka kwesibindi ngo ukhilimu omuncu ne anyanisi, kufanele sitshele ukuthi kwenzeke kanjani ukuba kudingekile ukukhetha okunjalo leyavela. Ngenxa izinga layo lithembela ngokuphelele ukuthi luyoba khona idina lakho esiphundu futhi eqotho.
Ukuze ziye zaphumela ithenda futhi ukudla okunomsoco, abapheki abaningi batusa kuphela ukuthenga inkukhu livers. Phela, kuyinto cishe kungenjalo ababayo okuphekiwe ngokushesha okukhulu. Nokho, abanye besifazane bavame ukwenza nesitshulu nge yenkomo ngu-imikhiqizo. Ukuze isidlo esiphelele kungemnandi esibabayo Kwatholakala okumnandi, lokhu isithako kufanele aphathwe ngokucophelela. Yikuphi, sizokutshela kancane ephansi.
Ngakho, ngaphambi kokuba wenze kwesibindi ngo ukhilimu omuncu kanye no-anyanisi, kufanele uthenge kwesokudla. Akufanele kube mnyama kakhulu. Zonke emithanjeni namafilimu nge umkhiqizo kumele zisuswe ngokushesha ngaphambi ukudayiswa. Iphunga okuvela isithako anjalo kufanele kube mnandi futhi akavumi ukuba umuzwa wokwenyanya.
Delicious inkukhu kwesibindi: zokupheka ukhilimu omuncu
Kunezindlela eziningi zendlela ungakwazi ukulungiselela le leyavela dinner. Nokho, okumnandi kakhulu wabo inketho kuhilela ukusetshenziswa ukhilimu omuncu. Ngemva kwakhe ovela eceleni iba ezithambile ngaphezulu nokuthi uyatetema.
Ngakho indlela ukulungiselela inkukhu kwesibindi? Ungadliwa ku ukhilimu ezidinga ukusetshenziswa kwemikhiqizo elandelayo:
ukhilimu fresh lokucuketfwe fat Ubuningi bamahora okusezingeni eliphezulu - 185 g;
Frozen inkukhu kwesibindi - 800 g;
deodorized amafutha sunflower - 45 ml;
ukhilimu obukhulu - 70 ml;
naphakathi usawoti iodized, pepper, allspice ochotshoziwe - esetshenziswa ngokubona;
amanzi okuphuza ehlungiwe - 150 ml.
Ukucubungula inkukhu nge-umkhiqizo
Inkukhu sesibindi esingelapheki kubantu abangamaphesenti ukhilimu omuncu iphekwe ngokushesha okukhulu. Kodwa ngaphambi kokuba umkhiqizo is phansi ukufudumeza ukwelashwa, kufanele kube okuhle eneqhwa. Ngaphezu kwalokho isithako kufanele usike ngayo yonke imithambo nezinye izingxenye engenakudliwa ngobubi bawo. Ngemva kwalokho, isibindi kufanele ngokuphelele engahashazanga ngaphansi kwamanzi kampompi abandayo kanye Chop at izingcezu aphakathi. By endleleni, abanye besifazane uncamela ukulungiselela umkhiqizo elinjalo ifomu kuyavumelana.
Ngaphandle kwesibindi, handling ngokucophelela liyadingeka ukuze adalule no-anyanisi. Bona zigezwe kusukela husk, bese nquma ku cubes ezincane.
Ukuze inkukhu kwesibindi ngo ukhilimu waphenduka esihlwabusayo elimnandi, kufanele pre-ethosiwe emafutheni deodorized. Ukuze wenze lokhu, ufuna ukusebenzisa ezijulile sauté pan, kuwo uthele amafutha yemifino, bese ukufudumeza ke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, Cookware esishisayo kumelwe abeke zonke isibindi ngaphambili ngayo. Ngemva leyavela zonke ketshezi ukuhwamuka, idinga gazinga ngokucophelela angu-10. Ekupheleni kwesikhathi wathi kunesidingo ukwengeza isibindi onion ama ukuphinda ukwelashwa ezishisayo ngamafutha (imizuzu emi-5).
Ngemva izithako abe gazinga kancane, kufanele kuqale wokukucima kubo. Kuze kube yimanje, kwesibindi kuyadingeka ukuze uthele amanzi kancane bese wengeza usawoti kanye pepper olwembiza. Ibila mikhiqizo, kuyinto efiselekayo ngoba ¼ ihora. Phakathi nalesi sikhathi, izithako kufanele Sekukancane ngokuphelele. Ekupheleni kufanele uthele ukhilimu esindayo futhi ukhilimu okunamafutha. Govuza yezingxenye ngesipuni enkulu, ukupheka abo Kunconywa cishe imizuzu engu-10 on ukushisa low. Ngakho epanini kumele ivalwe.
Proper okuphakelayo ukujula goulash elimnandi
Uma sesibindi esingelapheki kubantu abangamaphesenti ukhilimu omuncu kanye no-anyanisi iphekwe, kufanele wawanda nezitsha ezijulile futhi ukukhonza amalungu omndeni, kanye nocezu lwesinkwa. Uma ufuna ukwenza okwehla esiphundu, bese ukuze goulash ezinjalo kutuswa ngaphezu kwalokho wenze okumnandi side dish. Ngokwesibonelo, kahle inkukhu kwesibindi kuhlanganiswe amazambane esishwabene, nokunye okufana nokolweni noma irayisi iphalishi crumbly, kanye nanoma yikuphi pasta.
Step by step recipe: isibindi (iyisitshulu) ukhilimu omuncu
Uma ukupheka dinner okumnandi uthenge yenkomo amnandi nge-imikhiqizo, kufanele kahle zelashwe ngaphambi kokuba eqeda. Uma ungaphenduki, ke isidlo sakho lizwakale ezibabayo kangangokuba ngeke aphele.
Ngakho, ukulungiswa isibindi e ukhilimu omuncu kudinga ukuthi uwayehlalise yayitholakala kule mikhiqizo:
ukhilimu fresh lokucuketfwe fat Ubuningi bamahora okusezingeni eliphezulu - 190 g;
yenkomo kwesibindi, eqandisiwe noma chilled - 800 g;
Utamatisi unamathisele - 2 dessert nezinkezo;
izaqathe Fresh - 2 PC nalasemkhatsini;.
a uthenge ubisi mafutha - 400 ml;
amanzi okuphuza - 140 ml.
Ilungiselela yenkomo by-imikhiqizo
Ukuze ziye zaphumela amakhukhi esihlwabusayo kakhulu ukhilimu, kufanele incibilikiswa kusengaphambili ngokuphelele. Ngemva kwalokho, leyavela kudinga ukusika ngokucophelela zonke Amapayipi Bile. Uma okuqukethwe kwabo kukhona ngezikhathi siwela phezu kwanoma iyiphi isakhi esiyinhloko, kuyoba nzima kakhulu.
Ngakho, ngokususa zonke engadingekile izakhi yenkomo isibindi kudinga engahashazanga ngokucophelela lokuqala ngamanzi afudumele bese abandayo. Ngaphezu kwalokho, kufanele uthathe yizicucu ezinkulu futhi indawo endishini enkulu. Ngemva kwalokho isithako kumelwe sisetshenziselwe ubisi olunamafutha amancane noma esitolo-uthenge futhi ushiye imizuzu 35-45. Le nqubo kuyadingeka ukuze kuncisha esiphezulu leyavela ukufutheka, okwenza kube mnene futhi ezithambile. Ekupheleni kwesibindi kufanele kabusha wageza uthathe yizicucu ezincane.
Ukuze kulungiswe esiphundu yenkomo wesibindi ukhilimu omuncu kumele kusetshenziswe hhayi kuphela ngokuthi ovela eceleni, kodwa futhi imifino efana izaqathe kanye anyanisi. Badinga ukuhlanza futhi Chop. Izaqathi kumele uthathe tincetu, kanye no-anyanisi - ku cubes.
ukwelashwa ukushisa endaweni Skillet
Ngemva ukulungiswa izithako ngokuyinhloko kufanele kube ukuthi uthele epanini namafutha deodorized awubeka ukushisa eliphezulu. Lapho amafutha yemifino uqala ubilise, kuyadingeka babeka zonke kusetshenzwe yenkomo isibindi. Thosa eceleni efiselekayo inqobo nje uma uye ayahwamuka kusukela umswakama ngokweqile, futhi awusebenzi redden kancane. Ngemva kwalokho, kumelwe wengeze isithako ukuba ama kanye tincetu isanqante. Fry zonke izithako kufanele ibe mayelana 10 imizuzu.
Ukuze uthole ithenda kanye isidlo esihlwabusayo, yenkomo kwesibindi nemifino akudingeki kuphela gazinga emafutheni deodorized, kodwa futhi sikadali. Kuze kube yimanje, imikhiqizo kudingeka uthele amanzi kancane ukuphuza, kanye ukunambitheka kwabo nge-pepper, usawoti kanye nezinye izinongo esekhulile uyakuthanda. Yelula isidlo mayelana ¼ ihora kuya kufanele engeza utamatisi unama kancane futhi ukhilimu fresh lokucuketfwe fat okusezingeni eliphezulu. Ngokuphelele uhlanganise izithako ezidingayo ukuze uqhubeke nokwelashwa kwazo ukushisa cishe 10 imizuzu noma isivali sivalekile. Phakathi nalesi sikhathi, isibindi nemifino okuphekwe ngokugcwele, zithambile futhi yakha isobho simnandi kakhulu futhi obukhulu.
Kahle ukukhonza goulash kusuka yenkomo ngu-imikhiqizo etafuleni
Manje uyazi ukuthi kufanele sizisingathe kanjani upheke kwesibindi ekhaya. Ngemva goulash ibhalwe, kubalulekile ukuba sandise nezitsha ezijulile generously ufafaze amakhambi fresh oqoshiwe. Ngaphezu kwalokhu kwakusihlwa, ungakwazi ukwethula isinkwa amnyama noma amhlophe. Futhi uzilungiselele kusukela isibindi ukhilimu umhluzi avunyelwe ukuba bazithobe etafuleni kanye nanoma yimuphi omunye Hlobisa. Nokho, ingabe kufanele yenziwe yini ngokuhlukile embizeni. Bon appétit!
Uwoyela Herring: iresiphi kanye formula ibhulakufesi yimpumelelo
Izikelemu ngaphansi kwesikhumba. Lapho benza yini kulumkhuhlane?
Ukulungiselela christening: igama ukubaluleka Almir